गस्पेल गुड न्यूज, चर्च अफ गड वर्ल्डवाइड स्विजरल्याण्ड (WKG)
सुसमाचारको शुभ समाचार?
तपाईंलाई थाहा छ सुसमाचारको अर्थ "सुसमचार" हो। तर के तपाई वास्तवमै यसलाई राम्रो समाचार मान्नुहुन्छ?
तपाईं धेरैलाई जस्तै, मेरो जीवनको अधिकांश को लागि मलाई सिकाइएको छ कि हामी "आखिरी दिनमा" बाँचिरहेका छौं। यसले मलाई एउटा विश्व दृश्य दियो जुन चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा हेर्छ जुन हामीलाई थाहा छ कि संसारको अन्त्य "आज केहि छोटो वर्ष" मा आउनेछ। तर यदि मैले "तदनुसार व्यवहार गरेँ" भने म महासulation्कष्टबाट बच्न सक्नेछु।
धन्यबाद, यो अब मेरो इसाई विश्वासको केन्द्रबिन्दु होईन वा परमेश्वरसँगको मेरो सम्बन्धको जग हो। तर जब तपाईले केहि लामो समय सम्म केहि विश्वास गर्नुहुन्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन गाह्रो छ। यस प्रकारको विश्व दृश्य व्यसनी हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं "अन्त समय घटनाहरू" को एक विशेष व्याख्याको चश्माबाट हुने सबै चीजहरू देख्नुहुन्छ। मैले सुनेको छु कि अन्त्य-समय भविष्यवाणीमा निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरूलाई हास्यकर रूपमा "apocaholics" भनेर सम्बोधन गरिएको छ।
वास्तविकतामा, यद्यपि, यो हाँसोको कुरा होइन। यस प्रकारको विश्व दृश्य हानिकारक हुन सक्छ। चरम अवस्थाहरूमा, यसले मानिसहरूलाई सबै कुरा बेच्न, सबै सम्बन्धहरू छोड्न, र सर्वनाशको लागि पर्खिरहेका एक्लो ठाउँमा सर्न मानिसहरूलाई लोभ्याउन सक्छ।
हामी मध्ये धेरैजना त्यो टाढा जान सक्दैनौं। तर यस्तो मनोवृत्ति जसले हामीलाई थाहा छ कि निकट भविष्यमा जीवनको अन्त्य हुन्छ यसले मानिसहरूलाई वरपरका पीडा र कष्टहरू "लेख्न" र सोच्न सक्छ, "यो के हो?" उनीहरू सबै कुरा हेर्छन्। उनीहरूको वरिपरि निराशावादी तरीकामा र चीजहरू सुधार गर्न काम गर्ने सरोकारवालाहरू भन्दा बढी दर्शक र सहज न्यायाधीश बन्नुहोस्। केही "भविष्यवाणी दुर्व्यसनीहरू" यहाँसम्म कि मानवीय राहत प्रयासलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्न को लागी जान्छन् किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि अन्यथा तिनीहरू अन्ततः केही समय ढिलाइ गर्न सक्छन्। अरूले स्वास्थ्य र आफ्ना बच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्छन् र उनीहरूको वित्तको ख्याल राख्दैनन् किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको लागि योजना बनाउन भविष्य छैन।
यो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने तरिका होइन। उहाँले हामीलाई संसारमा ज्योति हुन बोलाउनुहुन्छ। दुःखको कुरा, "क्रिश्चियनहरू" का केही बत्तीहरू प्रहरी हेलिकप्टरमा हेडलाइटहरूजस्तो देखिन्छ जसमा अपराधहरू पत्ता लगाउनको लागि छिमेकीहरू गस्ती गरिरहेका थिए। येशू हामीलाई ज्योति बन्न चाहानुहुन्छ कि हामीले यस संसारलाई वरपरका मानिसहरूलाई अझ राम्रो स्थान बनाउन मद्दत गरिरहेका छौं। म तपाईलाई भिन्न परिप्रेक्ष्य दिन चाहान्छु। किन विश्वास गर्दैनौं कि हामी "आखिरी दिनहरू" को सट्टा "पहिलो दिनहरू" मा छौं?
येशूले हामीलाई विनाश र अँध्यारो घोषणा गर्न निर्देशन दिनुभएन। उनले हामीलाई आशाको सन्देश दिए। उनले हामीलाई संसारलाई बताउन भने कि जीवन "प्रतिलिपि" गर्नुको सट्टा जीवन सुरु हुन्छ। सुसमाचार उसको बारेमा हो, ऊ को हो, उसले के गर्यो, र यसको कारण के सम्भव छ। जब येशू उसको चिहानबाट स्वतन्त्र हुनुभयो, सबै परिवर्तन भयो। उसले सबै कुरा नयाँ बनायो। उहाँमा परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो र स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै कुरा मिलाउनुभयो (कलस्सी १: २ 1,16-२17)
यो अद्भुत दृश्य यूहन्नाको सुसमाचारको कथित सुनौलो पदमा संक्षेप गरिएको छ। दुर्भाग्यवस, यो पद यति धेरै परिचित छ कि यसको शक्ति सुस्त भएको छ। तर फेरि यो पद हेर्नुहोस्। यसलाई बिस्तारै पचाउनुहोस् र अचम्मका तथ्यहरूलाई साँच्चिकै डुब्न दिनुहोस्: "त्यसैले परमेश्वरले संसारलाई माया गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरो दिनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्ने सबै हराउनेछैनन्, तर अनन्त जीवन पाउनेछन्"। (यूहन्ना १:3,16:१)
सुसमाचार प्रलय र कयामतको सन्देश होइन। येशूले अर्को पदमा यो प्रस्ट पार्नुभयो: "किनकि परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई संसारको न्याय गर्न संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बचाइनेछ।" (यूहन्ना १:3,17:१)
संसारलाई बचाउनको लागि परमेश्वर बाहिर हुनुहुन्छ, यसलाई नाश गर्न होइन। त्यसकारण जीवनले आशा र आनन्द झल्काउनुपर्दछ, निराशावादी र डराउने भविष्यवाणी होइन। येशूले हामीलाई मानवको अर्थ के हो भनेर बुझाउनुभयो। भित्रबाट अभिमुखी हुनु भन्दा पनि हामी यस संसारमा उत्पादक र रचनात्मक रूपमा बाँच्न सक्दछौं। यदि हामीसँग अवसर छ भने हामीले "सबैलाई भलो गरिदिनुपर्दछ, विशेष गरी हाम्रो विश्‍वासकर्मीहरूले"। (गलाती 6,10:१)। डाफुरमा भोग्नु परेको पीडा, मौसम परिवर्तनको उदाउँदो समस्याहरू, मध्य पूर्वमा भइरहेको युद्ध र हाम्रो घर नजिक रहेका अन्य सबै समस्याहरू हाम्रो सम्बन्ध हो। विश्वासीहरूको हैसियतमा हामीले एक अर्काको ख्याल राख्नुपर्दछ र हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ - तर छेउमा बस्नु हुँदैन र हामीबाट मुस्कुराएर चुप लाग्नु हुँदैन: "हामीले तपाईंलाई भनि्यौं"।
जब येशू पुनरुत्थान हुनुभयो, सबै मानिसका लागि परिवर्तन भयो - उनीहरूलाई यो थाहा थियो कि थिएन। हाम्रो काम हाम्रो सक्दो राम्रो गर्नु हो ताकि मानिसहरूले थाहा पाउनेछन्। "वर्तमान दुष्ट संसार" ले नसकेसम्म हामी विरोधको सामना गर्छौं र कहिलेकाँही सतावटको पनि सामना गर्छौं। तर हामी अझै प्रारम्भिक दिनमा छौं। अगाडिको अनन्ततालाई ध्यानमा राख्दै, इसाईमतका यी दुई हजार वर्षहरू केवल आँखा झिम्काए।
जहिले पनि परिस्थिति खतरनाक हुन्छ, मानिसहरू बुझ्दछन् कि उनीहरू विगतका दिनहरूमा बाँचिरहेका छन्। तर संसारका खतराहरू दुई हजार बर्षसम्म आइसकेका छन् र ती सबै इसाईहरू जो अन्तको समयमा बाँचिरहेका थिए भन्ने कुरामा निश्चित थिए - प्रत्येक पटक। भगवानले हामीलाई सहि मार्गमा सही मार्ग दिनुभएन।
तर उनले हामीलाई आशाको सुसमाचार दिए, जुन सुसमाचार सबै मानिसहरूलाई हरदम चिन्नु पर्छ। हामी नयाँ सृष्टिको पहिलो दिनमा बाँच्न पाउने अवसर पाउँदछौं जुन येशू मृत्युबाट बौरिउठ्नुभयो।
मलाई लाग्छ यो आशावादी, सकरात्मक र हाम्रो बुवाको व्यवसायमा हुनुको वास्तविक कारण हो। मलाई लाग्छ कि तपाईले पनि त्यस्तै देख्नु भयो।